Fiarovana ny fambolena :: Hamoraina ny fahazoam-baovao mikasika ny toetr’andro ho an’ireo mpamboly • AoRaha
Fiarovana ny fambolena Hamoraina ny fahazoam-baovao mikasika ny toetr’andro ho an’ireo mpamboly
Hanampy ny tantsaha amin’ny fanomezam-baovao mikasika ny fandaharam-potoana amin’ny fambolena sy ny toetr’andro ny minisiteran’ny Fambolena sy fiompiana ary ny jono, miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy. Amin’ny alalan’ny tetik’asa fampifanarahana ny lalam-pihariana ara-pambolena amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro no hanatanterahana izany. Hiantso amin’ny finday ireo tantsaha ary afaka hahazo izay vaovao ilainy mikasika ny fambolena tiany hatao sy mifanaraka amin’ny toe-tany misy any aminy.
Tsy mijanona ho fanomezam-baovao fotsiny ihany fa hahazo torolalana manokana momba ny karazana fambolena misy eo amin’ny faritra izay iantsoany ilay mpamboly. Ny vaovao mikasika ny fambolena vary, katsaka ary voanjo sy sakamalaho no azon’izy ireo.
“Afaka mametraka fanontaniana ireo mpamboly rehetra manomboka izao hoe ahoana no tokony hatao mikasika ny lalam-pihariana vokariny, mba hahafahany mandrindra ny fandaharan’asany ka hahatongavana amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo”, hoy Ranarivelo Fanomezantsoa Lucien nandritra ny fampahafantarana ity tetikasa ity, teny Ampandrianomby, omaly. Noho ny fiaraha-miasa amin’ny orinasam-pifandraisana dia afaka miantso inenina maimaimpoana ireo tantsaha
ary amin’ny sarany 200 ariary aorian’izay.
Fanarenana sy fanitarana :: Mitohy ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo
Fandaminana ny fifamoivoizana :: Nosoloina ireo takelaby torolalana very na simba